Furayaasha xulashada laptop | Ragga Stylish
Ragga Stylish | | La cusboonaysiiyay 24/10/2015 10:30 | Tiknoolaji
Labada buug-yare, netbook, laptop-yada ama taleefannada super-ka iyo sidoo kale PDA-yada ama iphone-ka waxay na siinayaan wax aaladaha kale aysan na siinin: wareejinta.
Haysashada suurtagalnimada shaqo qaadashada, wax barashada ama ku raaxeysiga meel kasta oo aan dooneyno waa wax inbadan oo naga mid ahi ay rabaan.
Laakiin marka aad iibsaneyso mid ka mid ah aaladahaan ... maxay yihiin waxyaabaha ay tahay inaan tixgalino si aanaan u khaldamin? Tani waa su'aal fudud, laakiin weyn. Maalin kasta, tiknoolajiyada waa la cusbooneysiiyaa, sidaa darteed, hoosta waxaan ku siin doonaa sifooyin kala duwan iyada oo la tixgelinayo baahiyahaaga iyo faa'iidooyinka koox kasta.
Waxaa jira kuwa dhaha ma jiro farqi weyn oo udhaxeeya laptop-ka iyo buug yaraha, laakiin farqiga ugu weyni waa cabirka. Laptop-yada ayaa waxyar ka weyn buugta wax lagu qoro. Kadib, iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda, waxaa soo baxay buugaagta netka, oo ah kombiyuutarada ugu yar suuqa.
Laptopsyada: Iyagu waa kuwa ugu awoodda badan, ugu weyn, kuwa ugu raaxada badan shaqooyinka u baahan shaashad ballaaran, laakiin sidoo kale iyagu waa kuwa ugu culus. Waxaa jira 17 inji ama ka badan. Waxay leeyihiin disk iyo awood badan oo xusuus ah. Iyagu waa waxa ugu dhow kombiyuutarada miiska marka loo eego sahlanaanta isticmaalka, xawaaraha, iyo waxqabadka. Waxay leeyihiin awood aad u tiro badan oo ah in xamaasadaha ciyaaruhu u isticmaali karaan dhibaato la'aan.
Buugaagta xusuus qorka: Farqi badan uma dhexeeyo kuwii hore xagga shuruudaha, laakiin way ka yar yihiin gaadiidka. Shaashadahoodu waa qiyaastii 13 ama 15 inji. Waxay sidoo kale leeyihiin waxqabad sare, laakiin sidoo kale waxaan leenahay kuwa ugu jaban ee waxqabadkooda iyo xawaarehoodu hooseeyo. Sikastaba xaalku ha ahaadee, kumbuyuutarradan gacanta lagu qaato ayaa ku habboon kuwa ay tahay inay ku socdaan oo ay u baahan yihiin inay la shaqeeyaan barnaamijyo culus, daawashada filimada, iwm.
Buugga internetka: Halkan waxaan ku aragnaa ugu badnaan qaadista. Iftiin yar iyo mid yar. Waxay badbaadiyaan ruuxi lumay ee caanka ahaa "Libretto" (buug yar) ee ay qortay Toshiba, markii buugaagta xusuus-qorka loogu talagalay inay noqdaan kuwa ugu yar, laakiin maanta qeexitaanka shaashadda iyo awoodda ayaa aad uga wanaagsan. Xitaa iyadoo sidaas ah, gabdhahan yaryar waxay leeyihiin aayahooda ugu weyn ... inay ku noolaadaan codsiyada internetka. Taasi waa sababta ay dhammaantood diyaar ugu yihiin inay adeegsadaan Wi-Fi. Tani waxay hubinaysaa koontadaada emaylka, la sheekaysiga iyo adeegsiga ereyga ereyga ama xaashiyaha iyada oo aan laga fileynin raaxo weyn maxaa yeelay shaashadeeda yar 8 illaa 10-inji Waxay leeyihiin oo ka soo horjeedda in kumbuyuutarkoodu uu yar yahay oo yar yahay, inbadan oo diskiyo ah. Qaarkood xitaa waxay isticmaalaan disk adag oo aan caadi ahayn (solid state memory) oo aan ahayn disk dhaqameed laakiin sida kan pendrive leh si loo hadlo.
Maxay tahay inaan ku xisaabtano hadba sida aan ugu baahanahay? Waxaan u laabaneynaa su’aalaha muhiimka ah.
Jeebkeena. Halkan buugaagta wax lagu qoro iyo buugaagta netbook-ka waxay u dagaallamaan booska, laakiin sidoo kale waxay u sadqeeyaan awood qiimo jaban. In kasta oo netbook-ka ay yihiin kuwa ugu raqiisan marka la barbardhigo, aan u qaadanno inaysan haysan ciyaartoy CD ama DVD ah.
Waxqabadka iyo xawaaraha. Haddii aan rabno inaan la shaqeyno barnaamijyada nashqadeynta ama u baahan dhammaan ilaha kombuyuutarradeena iyo sidoo kale shaashad weyn, laptop-yada ayaa la dooran doonaa. Xusuusta iyo processor-ku waa arrimo muhiim ah oo si weyn u wada qiimaha laptop-ka. Maalmahan waa inaan ka fikirnaa in 1GB RAM uu durbaba sii socdo, gaar ahaan noocyada cusub ee nidaamyada hawlgalka sida Windows Vista ama 7 iyo OSX 10.5 ee Macs (kuwaas oo la socda 2GB oo saldhig u ah warshadda). Atom, Celeron oo ka socda Intel iyo Sempron oo ka shaqeeya AMD ayaa ah noocyada ugu raqiisan laakiin sidoo kale leh xawaaraha iyo waxqabadka ugu hooseeya. Inta kale ee processor-radu waxay kordhiyaan xawaaraha iyo waxqabadka, laakiin haddii aan xawaare u baahanahay, waa inaan xoogaa yar oo jeebkeenna ah ku maalgelino arrintan.
Awoodda Gawaarida xusuus-qorku aad ayey uga jaban yihiin maalmahan oo awooddu waxay gaaraysaa 320GB (ama 500GB moodooyinka ugu dambeeyay ee horumarsan laakiin tani sidoo kale waxay cunaysaa batteriga ilbiriqsi). Netbooks ayaa ku khasaaray qaybtaan waxayna ku guuleystaan ​​kuwa kale.
Miisaanka. Haddii aan u baahanahay inaan kumbuyuutarka meel walba ku qaadno, waa inaan tixgelinno inta uu culeyskiisu yahay, yaannaan ka fikirin oo keliya laptop-ka oo keliya, laakiin aan ku fikirno la-qabadyada awoodda, boorsada iyo kuwa kale. Goobaha ayaa ka walwalsan luminta miisaanka mashiinadooda laakiin waxyaabahan waxay kusii kordhinayaan kiloshooda dheeriga ah kaliya noocyo aad u yar ayaa bixiya waxyaabahan miisaanka fudud. Sida iska cad, halkan netbook-yada iyo 17-inch oo laptops ah ayaa guuleysanaya illaa iyo hadda, waxaan xisaabta ku heynaa oo keliya haddii ay ku soo galaan boorso shaagagga leh!
Madax-bannaanida Waxaan keydshay midka ugu muhiimsan ee laptop-ka markii ugu dambeysay haddii uu ku faano inuu mid yahay. Waa inaad fiirisaa inta batterigu socdo. Halkan waxay ku ciyaaraan waxyaabo dhowr ah isla waqti isku mid ah. Haddii aan wax badan u adeegsanno processor-ka iyo akhristaha DVD-ga (fiiri fiidiyow ahaan tusaale ahaan) si dhakhso leh baytariga noogu dhammeynayaa. Laptop-ka leh processor aad u dheereeya ayaa isna isticmaala batteri badan. Batariyadu waxay sheegaan inta "unugyo" ah ee ay leeyihiin tanina waa awooda ismaamulka ee ay sidoo kale na siin doonaan.
Waa inaan sameyno isbarbardhig oo aan u aragnaa hadba baahideena taas oo ah mida ku habboon waxa aan adeegsan doonno iyo waxa aan dooneyno inaan muhiimadda badan ka saarno inta kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Furayaasha xulashada laptop-ka
Sharaxaad aad u cad, in lagu xisaabtamo. Waad ku mahadsantahay soo galinta.
Jawaab Miguel Espende
Dabcan, laptop-ka ayaa aniga iifiican, mahadnaqa macluumaadka!
Koofiyad xirashada miyuu keenaa timo lumis?